दिनेश भुर्तेल/नयाँ वर्षसँगै विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक शत्र फेरिन्छ । वर्षेनी नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु भएपछि निजी विद्यालयको शुल्क वृद्धिको ‘इस्यु’ ले बजार तताउँछ । यससँगै अभिभावकको रुवाबासी सुरु हुने गर्छ । निजी विद्यालयले मनोमानी उठाउने शुल्कका कारण १/२ महिना मिडियादेखि विभिन्न मन्चका वक्ताले विद्यालय सञ्चालकमाथि ‘धारे हात’ लगाउँछन् । फेरि, जति नै चर्को शुल्क लिएपनि छोराछोरी निजीमै पढाउँछन् । यसबारे अलग्गै बहस हुन्छ । यस आलेखमा निजी विद्यालयले शुल्क वढाएको नाममा ‘कवच’ बन्न खोज्ने विद्यार्थी संगठनका नेताहरूको वास्तविकताबारे केही तथ्य केलाउनु सान्र्दभिक हुनेछ ।
वास्तवमा वर्षेनी निजी विद्यालयमा हुने शुल्क वृद्धिले अभिभावकको ढाड सेकेको छ । त्यसमा कुनै विमती छैन् । त्यतिमात्र होइन उही विद्यालयमा पढ्दा पनि भर्ना शुल्क लिने, स्टेशनरी लगायत ड्रेस विद्यालयले नै उपलब्ध गराएर महँगो रकम असुल्ने निजी विद्यालय सञ्चालक राज्यभन्दा माथि देखिन्छन् । अहिलेको बलियो भनिएको सरकारले चाहेमा के सरकारले शुल्क व्यवस्थापन गर्न सक्दैन् ? पक्कै पनि सक्छ । तर, खोट राज्य सञ्चालकको नियतमा छ, खोट हामी अभिभावकको शुल्क फिर्ता गराउँछौ भन्दै हिड्ने शिक्षाका माफियाहरुको छ । र, त्यसको साक्षी बस्दै आएका छन् विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरू । सार्वजनिक मञ्चमा शुल्कविरुद्ध चर्को स्वरमा कराउने विद्यार्थी संगठनका नेताहरूका ‘अन्नदाता’ नै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू हुन् ।
शुल्क वृद्धिबारे आन्दोलनको घोषणा पनि गरिन्छ । तर, त्यो केही दिनपछि त्यतिकै तुहिन्छ । त्यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि मुद्दा सल्टेकै हुँदैन आन्दोलन सकिन्छ । विगतका थुप्रै आन्दोलनहरूले पनि यो पुष्टि गरिदिएको छ । नत्र गत वर्षेनी निजी विद्यालयको चर्को शूल्क वृद्धिको विरुद्धमा विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त आन्दोलन गर्दै आएका हुन् । आन्दोलन फगत देखाउने क्रान्तिकारिता मात्र भएको छ,आज के देखिन्छ भने निजी विद्यालय सञ्चालकलाई विद्यार्थी नेताहरूले बार्गेनिङ गर्ने शक्ति बढाएका हुन् । उनीहरूको छोराछोरीलार्इ निःशुल्क पढाउन थप सहयोग गर्छ यो आन्दोलनले ।
विद्यार्थी संगठनका नेताहरूको आर्थिक स्रोत के हो ?
३ लाखको बाईक चढ्ने र त्यसमा हाल्ने तेलको स्रोत के हो ? काठमाडौँमा फ्ल्याट लिएर बस्ने खर्च बिद्यार्थी नेताहरूलाई कहाँबाट जुट्छ ? जागिर गरेर त काठमाडौँमा हातमुख जोर्न धौ–धौ परेको अवस्थामा होलटाइमर कार्यकर्ताको खर्च कसरी टर्छ ? कुनै पनि पार्टीले कार्यकर्तालाई तलब तोकेको छ छैन् । त्यसकारण आन्दोलन सार्थक बनाउन पहिला आफ्नो स्वार्थ त्याग्न जरुरी छ । हो, युवा विद्यार्थी परिवर्तनका वाहक हुन् । संगठनले चाहेमा परिवर्तन संम्भव छ, तर त्यसमा स्वार्थ छिपेको छ, यसले आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँछ । आन्दोलन नै गरेर निजी बिद्यालयको शुल्क घटाउने हो भने उनीहरूले विलासी जिन्दगी जिउनै पाउँदैनन् । मैले अहिलेसम्म झुक्किएर बाहेक आफ्नै खुट्टामा कसैले बन्चरो हानेको देखेको छैन् । यसपटकको आन्दोलन झुक्किएर आफ्नै खुट्टामा हानेको बन्चरो जस्तै भयो भने मात्र हो नत्र आन्दोलन तुहिन्छ ।
(भूर्तेल नेपाली कांग्रेस काभ्रेका जिल्ला सदस्य हुन्)
प्रकाशित ७ बैशाख २0७५ , शुक्रबार | 2018-04-20 11:51:26